Raadiyaha gaariga kirada ah - gaarigaaga qiimaha ugu fiican?
Ma u baahan tahay gaari kiro ah? Kadib waxaad gaadhay boggii aad raadineysay. Isticmaal annaga gawaarida raadiyaha midna ku hel qiimaha ugu fiican iyo dhammaan dammaanadaha suurtogalka ah.
Gawaarida raadinta kirada gaariga
Xagga sare khadadkan waxaad ka heli doontaa mashiinkeena raadinta ee awooda badan oo kaa caawin doona inaad hesho qiimaha ugu fiican ee la damaanad qaaday. Isticmaalkeedu waa mid aad u fudud, si fudud u gal meesha laga soo qaadayo, calaamadee taariiqda soo qaadista iyo soo noqoshada oo kaliya waa inaad raadisaa oo waxaad kuheli doontaa ugu badnaan gawaarida kirada ah ee farahaaga.
1 Gawaarida raadinta kirada gaariga
2 Gaadhi kiro
3 Faa'iidooyinka kirada gaariga
4 Kireyso gaari khadka tooska ah
4.1 Gawaarida Rental
5 Sida mishiinka raadinta gawaarida qadka uu u shaqeeyo
6 Ma kiraysan karaa gaari aan lahayn kaarka amaahda?
7 Sidee kireysiga baabuurta ee shaqsiyaadka u shaqeeyaa?
Mid ka mid ah welwelka badan ee soo noqnoqda ee soo baxa marka la qorsheynayo safarradeenna, gaar ahaan haddii ay yihiin kuwo baaxad weyn leh, waa waxa la sameeyo haddii ay dhacdo in aan leenahay waajib baahan tahay in la qaado dariiqyada isku murugsan ama safarada magaalooyinka kale.
Kuwo badan ayaa ka cararaya isticmaalka gaadiidka dadweynaha, ama sababo la xiriira raaxo la'aan iyo xorriyad xagga jadwalka ah, iwm. taasi waxay tusineysaa, ama kororka ay ku dhalinayaan wadarta kharashka ama miisaaniyadda. Si kastaba ha noqotee, ku dhaqaaqida baabuurkeena marwalba suurtagal maaha, taasi waa halka ay fikradda ka tahay gawaarida kirada ah.
Waxay noqon kartaa in marka hore, kireynta gaariga ay tahay hawl xoogaa adag, laakiin ma jiraan wax runta ka sii fog. Marka xigta, waxaan kuu sharxeynaa oo kaa caawinaynaa sida loo sameeyo. Iyo hadaad rabto inaad hesho qiimaha ugu jaban kaliya waa inaad gujisaa halkan.
Faa'iidooyinka kirada gaariga
Go'aansashada inaad codsato gaari kiro ah intaad safarka ku jirto waxay yeelan kartaa faa'iidooyin waaweyn:
Libertad ee jadwalka dhaqaaqa iyo guurista.
Qorshee dariiqyada iyadoo kuxiran baahidaada.
Badbaadinta, Tan iyo markii la kiraysto baabuur, haddii uusan ahayn gaari heer sare ah, wuxuu yeelan karaa qiimo u dhexeeya € 5 iyo € 15 maalintii. Si kastaba ha noqotee, haddii aan dooran lahayn gaadiidka dadweynaha, qaddarkan aad buu uga sii badnaan lahaa.
Awood u lahaanshaha a boorsooyin badan.
Kireyso gaari khadka tooska ah
Xilligan, shabakadda waxaan ka helnaa shirkado badan oo u heellan kirada baabuurta oo na siiya suurtagalnimada aan ku codsan karno adeegyadooda gebi ahaanba khadka tooska ah. Laakiin arintu halkan kuma dhamaanayso, laakiin waxaan haysannaa ikhtiyaar kale sida bogag kala duwan oo na siiya matooro raadin ah oo kala raaca inta u dhexeysa shirkadaha kala geddisan ee loo qoondeeyey qaybtan si ay noo muujiyaan qiimaha ugu fiican.
Kuwa ugu caansan, waxaan leenahay:
RentalCars waa madal kuu oggolaanaysa inaad isbarbardhigto dhammaan bixiyeyaasha adeegga kirada baabuurta si aad u hesho qiimaha ugu jaban. Isticmaalkeedu waa mid aad u fudud, kaliya waa inaad gujisaa halkan, dhammeystir dhammaan xogta oo hadda waxaad ku keydin kartaa gaarigaaga kirada qiimaha ugu fiican.
Miisaaniyadda waxaa lagu aasaasay California, gaar ahaan magaalada Los Angeles, 1958. Waxay ku bilaabatay ganacsi qoys oo yar oo leh kaliya 10 gawaarida kirada ah.
Maanta, waxay leedahay noocyo kala duwan oo gawaari ah, gawaari waaweyn iyo gawaadhida yar yar, marka lagu daro wadar ahaan 3.400 xafiis oo ku yaal 128 dal.
Shirkad ku takhasustay kirada baabuurta ee Yurub leh in kabadan 60 sano oo waayo aragnimo ah ayna ku kalsoon yihiin in kabadan lix milyan oo macaamiil ah sanadkii 2014. Waxaad ku ogaan kartaa dalabkooda adoo galaya xiriiriyahan.
Six.es waa adeeg khadka tooska ah ka bixiya kirada baabuurta Spain oo idil iyo in ka badan 105 dal oo adduunka ah. Iyo hada waxaad ku dalban kartaa qiimo dhimis 10% ah mahadsanid AbsolutViajes riix halkan. Miyaad seegaysaa fursadda?
Maalmahan, oo barnaamijyadu ay noqdeen aalad aan laga maarmin oo nolosheena ka dhigaysa mid "fudud", KAYAK ayaa soo ifbaxay, ujeeddadeeduna tahay inay gacan na siiso markii aan qorsheyneyno safarkayaga ugu habboon. isbarbardhiga qiimaha ugu fiican ee udhaxeeya bogagga kala duwan. Iyo, dabcan, waxay sidoo kale na siisaa suurtagalnimada helitaanka gaariga kirada ah ee sida ugu fiican ugu habboon baahiyahayaga.
Qof kastaa wuxuu leeyahay dhadhankiisa, waana sababta Avis ay noo siiso a gawaarida waaweyn ee waaweyn noocyada kala geddisan: laga bilaabo gawaarida fudud illaa awoodda iyo raaxada. Waxay sidoo kale si joogto ah noo siisaa qiimo dhimis kala duwan oo joogto ah. Ikhtiyaar inaad marwalba maskaxda ku hayso, taas oo waliba Hadda waxaad haysataa dalab 3 maalmood ah qiimaha 2 adoo gujinaya halkan.
Sida mishiinka raadinta gawaarida qadka uu u shaqeeyo
Haddii aan la macaamilno mashiin raadin oo isbarbardhigaya qiimaha u dhexeeya shirkadaha kala duwan ee kirada baabuurta ama haddii ay tahay mashiin raadinta shirkad gaar ah, hawlgalku had iyo jeer waa isku mid.
Iyaga ayaynu nahay muujin doonaa shaashad leh sanaadiiq kala duwan iyo xulashooyin ay tahay inaan buuxino. Marka horeba, waa inaan tilmaannaa meesha aan xiiseyneyno inaan ka qaadno gaariga. Hadhow, waxaan tilmaami doonnaa taariikhaha aruurinta iyo keenista isku mid. Ugu dambeyntiina, waa inaan si faahfaahsan u qeexnaa nooca iyo astaamaha gaariga.
Waa in la ogaadaa in, iyadoo kuxiran mashiinka raadinta ee la isticmaalay, lagu qasbay inaan bixinno noocyo kale oo macluumaad ah. Si kastaba ha noqotee, shuruudahan kor lagu soo sheegay waa kuwa u muuqda sida caadiga ah guud ahaan foomamka raadinta, dhaqdhaqaaqyaduna badanaa waa sida lagu sharaxay.
Ma kiraysan karaa gaari aan lahayn kaarka amaahda?
Shirkadaha badankood aad ayey u diidan yihiin inay u oggolaadaan kirada baabuurka maraya lacag bixinta, laakiin u baahan a kaarka deynta loogu talagalay Sidaa darteed, waxay noqon kartaa hawlgal aan macquul aheyn in la helo gaari kiro ah iyada oo aan hawlgalka noocan ahi dhicin.
Sababta loo diidayo lacagta gacanta ku jirta waa mid aad u fudud. Baabuurtu waa qaali, way adag tahay in la dayactiro, qaasatan, waxay leeyihiin dayactir xaaladaha qaarkood ay noqon karaan kuwo aad iyo aad qaali u ah. Taasi waa sababta shirkadaha ay tahay inay hubiyaan in gawaarida aysan waxyeello ka soo gaarin macaamiisha, haddii taa la fulin waayo, waa inay isku dayaan inay yareeyaan si aysan u keenin khasaaro dhaqaale. Sidan oo kale, waxay abuuraan caymiska ku lifaaqan kirada gaariga.
Caymisyadan waxaa lagu hayaa dhigaal qaab lacag ah oo uu bixin doono oo keliya macmiilku haddii ay dhacdo baahi (cilad farsamo, jajab, jug, iwm) Kaadhadhka deynta way fududahay in la abuuro deebaaji noocan ah, "xayiraya" qaddar dheelitirka la heli karo ah oo "la sii deyn doono" marka gaadhiga la keeno
In kasta oo, sida wax kasta oo noloshan ka mid ahi isu beddelayaan, duruufahani ma yaraan doonin. Horeba dhowr magaalo oo waaweyn waxaa ka jira shirkado diyaar u ah inay gawaaridooda noo kireystaan ​​iyagoo ku bixinaya lacag caddaan ah. Khadka tooska ah ee internetka ayaa ka dhib badan, laakiin waxaa horey u jiray kiisaska qaarkood sida AutoEurope.
Sidee kireysiga baabuurta ee shaqsiyaadka u shaqeeyaa?
Muddooyinkii ugu dambeeyay, kirada baabuurta waxaa soo maray kacaan. Waxaa soo badanaya shirkadaha aan bixinin gawaaridooda, laakiin ku shaqeeya shaqsiyaad. Taasi waa, waa dadka xiiseynaya ganacsi ama macaash gaar ah ka helaya waxay bixiyaan gawaaridooda si looga dhigo kuwo heli kara dadka isticmaala.
Milkiilayaashu waxay doortaan qiimaha iyo helitaanka, markay helaan dalabka kirada, waxay doortaan midka ay u arkaan inuu ku habboon yahay iyagoo ku saleynaya danahooda. Goor dambe way xaqiijinayaan waxayna u diraan kiraystaha cinwaanka iyo tilmaamaha lagu uruurinayo gaariga.
Gaariga markasta waa in lagu soo celiyaa haanta gebi ahaanba shidaal ka buuxo (sidii ay ahayd waqtiga dhalmada), iyo si wadajir ah, milkiilaha iyo kiraystaha, hubi xaaladda gaariga si loo hubiyo in aan waxyeello iyo dhaawac la helin.
Mashruuc ay ku soo biirayaan dad aad u tiro badan oo doonaya inay helaan lacag dheeraad ah.
Go'aansiga inaad kireysato gaari ama nooc kasta oo gaari ah inta lagu guda jiro safaradayada waxay leedahay xulashooyin dhab ah oo noqda go'aan aan ka qoomameyn doonin.
Marka ugu horeysa, iyo marka aan go'aansanno inaan sameyno, waxaa laga yaabaa inaan kun su'aalo iyo shaki gaar ah maskaxdayada ku qabno Si kastaba ha noqotee, markaan horey u aqrinay dhammaan waxyaabaha kor ku xusan, waxaan rajeyneynaa in dhammaan su'aalahan laga wada jawaabay oo shakiga laga saaray.